[PANAS] Benarkah ISMA / BERJASA Jadi Kuda Tunggangan BN Untuk Pecahkan Undi Melayu?
Patutlah Samseng UMNO Bermaharajalela, Ada Ketua Polis Negeri Bekerja Untuk BN
Akhirnya, Anwar Fail Saman RM100 juta Terhadap Utusan, TV3
Fifth anniversary of 308
`လှည်းဘီး´ ကို ဘယ်ဘာသာဝင်တွေအတွက် တီထွင်ခဲ့ပါလိမ့် ..
[PANAS] Bapa Saiful Bukhari Akui Kes Liwat Kedua Sebuah Konspirasi
The Culinary Boy
‘ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စ်လင်မ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ လိုလားမှုနှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက် ‘
BBC: Malaysia Rejects Ceasefire Offer From Filipino Group
Myanmar rejects Muslim crackdown concerns of UN rights envoy
Self-Reliance (in Burmese) နှလုံးသားအာဟာရ
Posted: 08 Mar 2013 06:17 AM PST
ရရင်ရ မရရင်ချ ဆိုတာ
ခင်ဗျား ညီအငယ်ဆုံးလေးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
သူပြောခိုင်းတဲ့ ရည်းစားစကား ပြောပေးလိုက်ပါ။
ခင်ဗျားကားမောင်းရင် သတိကို ငယ်ထိပ်မှာကပ်ထား
သူ့ဟာသူ ငါးမူးတန်းက ကြည့်ကြည့် ၊ တစ်မတ်တန်းက ကြည့်ကြည့်
ဘ၀မှာ အပန်းဖြေနည်း လက်တစ်ဖက်မပြည့်ခဲ့တဲ့ သူ
ခင်ဗျားကို တိုက်သင့်ရင်တိုက်ရမှာပဲလို့ ပြောခဲ့တဲ့ အညာသားလေးကို။
မင်းမြေကို သူနင်းလိုက်တော့ တွန့်မသွားဘူးလား
ခင်ဗျားကို မေ့ထားပါ့မယ်။ခွင့်လွှတ်လို့တော့ မရသေးဘူး။
ခင်ဗျားသူ့ကို လောင်းကုတ်ကြီးပေးလိုက်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
အခု ကျွန်တော်တို့မှာ ဒါကြီးခြုံပြီး နွေးနေရတာ။
သူဇိမ်နဲ့မနေခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ဇိမ်နဲ့ နေနေရတာ။
ရွှေဘိုညချမ်းကလို သူရဲကောင်းမျိုး တွေ့ဖူးခဲ့လား၊တွေ့ဖူးရဲ့လား။
"ကျုပ်မှာ ကာမပိုင်နဲ့ဗျ" တဲ့။
မိန်းကလေးတန်မဲ့ လက်ဆွဲကျီစယ်မယ့် ညည်းတောင်
ဖောင်တိန်ကို ဆွဲလုလိုက်တာ မအံ့သြပါနဲ့။
၃၂နှစ်နဲ့ သေခဲ့တာတောင် ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကို
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ပြောခွင့်မရှိတော့။
ခြံစိုက်မယ်၊ စာရေးမယ်ဆိုတဲ့ သူ
Posted: 08 Mar 2013 07:05 AM PST
Petaling Jaya – Adun Taman Medan, Haniza Talha menyifatkan tindakan pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Ikatan Muslimin Malaysia (Isma) yang mahu bertanding 20 kerusi Parlimen dan Dun atas tiket Barisan Jamaah Islamiah Se-Malaysia (Berjasa) adalah tidak lebih sebagai kuda tunggangan Barisan Nasional (BN).
Beliau mendakwa tindakan Isma itu seolah-olah mahu menggagalkan strategi pertembungan dua penjuru antara Pakatan Rakyat (PR) dan Barisan Nasional (BN).
Menurut Haniza lagi, tindakan Isma itu bukannya bertujuan membawa kesejahteraan umat seperti diperkatakan sebaliknya untuk memecahkan undi Melayu.
"Saya lihat tindakan ini adalah sebagai usaha nak gagalkan lawan dua penjuru dan mereka kuda tunggangan BN.
"Tindakan ini akan mengakibatkan perpecahan undi Melayu terutamanya golongan atas pagar," katanya kepada Sinar Harian di sini semalam.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pengumuman dibuat Isma sebelum ini.
Haniza berkata, tindakan itu juga dilihat memberi lebih manfaat kepada BN sekiranya undi Melayu berpecah di kawasan polariti kaum 50-50 antara Melayu dan kaum lain.
Menurutnya, PR sentiasa bersedia apa sahaja keadaan dalam menghadapi pilihan raya umum (PRU) ini kali ini termasuk helah digunakan pihak lawan.
"Kita tahu pihak lawan akan guna apa sahaja cara untuk menang dan kita sentiasa bersedia dengan apa sahaja kemungkinan.
"Ini bukan perkara baru sebelum ini di pilihan raya kecil pun ada calon Bebas bertanding," katanya.
Posted: 08 Mar 2013 06:06 AM PST
Gambar fail" Datuk Chua Ghee Lye bersama Tan Sri Ismail Omar
"Beliau tidak layak jadi Ketua Polis Melaka. Mana ada dalam Malaysia ditandakan sebagai kawasan Umno. Kita tidak buat ceramah di markas Umno.Beliau menuduh penyokong kita yang mengakibatkan dua polis tercedera," kata Saifuddin.
Jika anda menyatakan " 'saya tidak hormat Anwar Ibrahim, saya tidak hormat Ketua Pembangkang, saya tidak hormat Pakatan Rakyat'" maka bererti anda tidak hormat orang yang dipilih rakyat, maka rakyat berhak untuk menghormati kamu, tidak menghormati pegawai atau anggota polis yang tidak menjalankan tugas secara adil, saksama dan professional!
Posted: 08 Mar 2013 03:12 AM PST
Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memfailkan saman RM100 juta terhadap Utusan Malaysia dan TV3 kerana menyiarkan berita yang didakwanya berunsur fitnah kerana mengaitkan dirinya dengan insiden keganasan di Lahad Datu.
Saman tersebut difailkan peguam yang mewakili Anwar, Latheefa Koya dan N Surendran di Mahkamah Tinggi Jalan Duta di sini.
Turut dinamakan dalam saman tersebut adalah lima defendan iaitu; Utusan Malayu (Malaysia) Bhd; Editor Utusan Malaysia Datuk Abdul Aziz Ishak; TV3, Pengarang Urusan Kumpulan TV3, Datuk Shahruddin Abdul Latif; dan Pengarang berita Buletin Utama, Ing Boon Seng.
"Tuduhan-tuduhan itu amat berat kerana ia seolah-olah menggambarkan Anwar (gambar) nak tawan negara sendiri," kata N. Surendran ketika sidang media di sini.
Akhbar Utusan Malaysia bertarikh2Mac 2013 telah menyiarkan artikel bertajuk "Ketua Pembangkang dikaitkan dengan pencerobohan?"
Selain ganti rugi am RM100 juta, Anwar turut menuntut gantirugi teruk dan gantirugi teladan, termasuk injuksi menghalang defendan-defendan menyatakan atau menerbitkan "perkataan-perkataan firnah" sama ada melalui percetakan, lisan atau Internet.
Jelas Surendran, dalam penyataan tuntutan mereka mendakwa, TV3 dan Utusan Malaysia melaporkan "Anwar Ibrahim adalah antara tiga dalang disebalik pencerobohan kumpulan bersenjata yang menggelar diri mereka sebagai Tentera Kesultanan Sulu di Lahad Datu yang menyebabkan pertumpahan darah."
"Artikel ini menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dalang bagi kejadian Lahad Datu. Ini adalah satu kenyataan yang tidak berasas, fitnah dan amat jahat...," kata N. Surendaran kepada pemberita.
"Perkataan-perkataan fitnah tersebut adalah palsu, tidak berasas dan disiarkan dengan niat jahat ... plaintif telah mengalami kecederan yang teruk terhadap karektor, penghormatan, reputasi peribadi, politik, dan menjejaskan kedudukannya," kata Surendran, yang juga Naib Presiden PKR.
Anwar diwakili firma peguaman Tetuan Daim dan Gamany dalam mefailkan tuntutan saman tersebut. -TMI
Lahad Datu: Anwar fail saman fitnah terhadap Utusan & TV3
Ketua Umum KEADILAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memfailkan saman RM100 juta terhadap Utusan Melayu Bhd dan TV3 Malaysia Bhd, berikutan laporan fitnah berkaitan isu pencerobohan Lahad Datu, Sabah.
Saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi melalui peguam N Surendran dan Latheefa Koya.
"TV3 dan Utusan pada2Mac mengeluarkan kenyataan fitnah terhadap Anwar, kononnya beliau 'dalang' di sebalik pencerobohan Lahad Datu. Kenyataan ini amat serius dan palsu tanpa ada bukti," kata Surendran kepada media.
Utusan sebelum ini menerbitkan laporan bertajuk 'Ketua Pembangkang dikaitkan dengan pencerobohan?' dan 'Tiga kumpulan jadi dalang' dengan mentohmah penglibatan Anwar dengan kumpulan berkenaan.
TV3 pula menggunakan istilah 'dalang' ketika mengaitkan Anwar dalam kejadian itu.
"Tuduhan itu berkaitan keselamatan negara dan fitnah terhadap Anwar adalah percubaan untuk menipu rakyat. Kita memandang kenyataan tersebut sebagai kenyataan Umno," jelas Surendran.
"Ia kerana Utusan dimiliki Umno, wakil Datuk Seri Najib Razak duduk dalam lembaga pengarah Utusan. Perdana Menteri bertanggungjawab penuh terhadap fitnah itu. Kerajaan perlu berhenti mempolitikkan isu Lahad Datu dan mengaitkan Anwar," tegasnya.
Anwar pada4Mac lalu melalui notis tuntutan 24 jam menuntut TV3 dan Utusan membuat permohonan maaf secara terbuka, menarik balik tuduhan, dan ganti rugi masing-masing RM100 juta.
Pada6Mac, TV3 meminta untuk menangguh jawapan kepada notis itu kepada dua minggu sementara Utusan pula tidak menyatakan tempoh.
"Kami tidak respon terhadap permintaan untuk tangguh oleh TV3 dan Utusan.
Kami respon dengan memfailkan saman. Hari ini sudah hampir seminggu sejak notis diberikan kepada mereka," kata Latheefa.
"TV3 pula masih menyiarkan laporan mengaitkan Anwar dalam insiden Lahad Datu dan itu menunjukkan mereka tidak serius dengan notis yang kita berikan," katanya lagi.
Anwar turut menuntut gantirugi teruk, gantirugi teladan serta injunksi menghalang kesemua defendan dari menerbitkan kenyataan fitnah terhadapnya.
Turut dinamakan sebagai defendan, pengarang utama Utusan, Datuk Abdul Aziz Ishak; pengarah kumpulan TV3, Datuk Shaharuddin Abdul Latiff dan editor berita TV3, Ing Boon Seng. – NS
Posted: 07 Mar 2013 03:15 PM PST
Today is the eighth of March, 2013. In popular parlance, 308. It's the fifth anniversary ofamomentous occasion for three political parties that called themselves collectively the Pakatan Rakyat. What were you doing five years ago? How did I feel on the night of the elections? What did I do to remember the political tsunami? Why, I wrote about it on this blog, of course! I hadatwo-part story logging some of my personal thoughts, and I called itanew dawn over Penang. Read the first part here. And then read the second part here.
Posted: 07 Mar 2013 11:26 PM PST
by U U Mhaw Sayar on Thursday, March 7, 2013 at 8:31pm ·
`… လှည်းဘီး မှစပြီး အနုမြူစွမ်းအင်အထိ ဖေါ်ထုတ်တီထွင်ပြီး လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း သာယာဝပြောရေးအတွက်အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ …´
`ဘင်္ဂါလီ´ခေါင်းစဉ်၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေ ,နေတဲ့ နိုင်ငံသားများကိုပါ ဘာသာရေးအရ သိမ်းကြုံးစော်ကားတိုက်ခိုက်ကာ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ မဖြစ်,ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်များ နဲ့ ခါတော်မှီ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော့်အမြင် နည်းနည်းပါးပါး ပြောချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ လွမ်းမိုးသွားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ အကြောင်းပြပြီး တခြားအယူဝါဒတွေကို အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ လူထုကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတာကို တွေ့နေရတော့ ဒီလိုလေးစဉ်းစားမိပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်သာသနာပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်မြတ်နိုးတယ် ဆိုရင်၊ ကိုယ့်သာသာနာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်သဘောပေါက်တယ် ဆိုရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ တခြားအယူဝါဒတွေ ကိုယ့်ကိုလွမ်းမိုးသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး.. ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ခံအားမကောင်းရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ စိုးရိမ်သလို ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်ရမှာက သူတပါးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အာရုံစိုက်နေမဲ့အစား ကိုယ့်သာသနာပေါ်မှာ နက်နက်နဲနဲ နားလည်ရပ်တည်နိုင်စေဖို့ အားပေးရမှာပါ။ `အကုသိုလ်´ကိုအားပေးတဲ့ စကားများကို ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ စင်ပေါ်တက်ဟောနေပါစေ .. ဒါ `တရား´မဟုတ်ပါ။
တစ်ခုပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုများကလွဲရင် ပြည်တွင်းဖြစ် ဘာသာသာသနာ တစ်ခုမှမရှိပါ။ ဘာသာအယူဝါဒ အားလုံးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၊ အီတလီအင်ပါယာများမှ စတင်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြား ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သုံးနှုန်းနေတဲ့ စကားနဲ့ပြောရရင် ဗုဒ္ဒအယူဝါဒဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှအစပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လွမ်းမိုးဝါးမြို ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတိုင်းပါပဲ အစ္စလာမ်အယူဝါဒဟာလည်း နိုင်ငံခြားဖြစ်အယူဝါဒ တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား
များနှင့် နိုင်ငံသားများသာဖြစ်တာကို သတိပြုသင့် ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အယူဝါဒတစ်ခုကို ကိုယ်က သက်ဝင်ယုံကြည်
တာဟာ ကိုယ့်ဆီကို အဲဒီအယူရှိတဲ့ တခြားဒေသကလူတွေ ၀င်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါ။
ဒီတော့ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းက အတူတကွ နေထိုင်လာကြသူများ အချင်းချင်း ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာမတူခြင်းကြောင့် သွေးကွဲရမည်လား။ အချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နေထိုင်လာခဲ့ တာတွေကို ပျက်ယွင်းစေမည်လား။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း နှိမ့်ချ အနိုင်ကျင့်ကြမည်လား။ ကျနော် နားလည်သလောက် မည်သည့် ဘာသာအယူဝါဒဟူသမျှ လူ,လူချင်း နှိမ်ချခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ အနိုင်အထက် ပြုခြင်းကို အားမပေးပါ။ ထို့အတူ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ သူ့ကိုးကွယ်ရာအယူဝါဒကို ညီမျှခြင်း ချလို့မရပါ။`သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား´သည်ပင်`ဗုဒ္ဓဘုရား´အဖြစ်
မရောက်ရှိမီ ကတည်းက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ပက်သက်ပြီး စင်ကြယ်ခဲ့သူလို့ သိရပါတယ်။ စဉ်းစားစရာက အဲဒီအချိန်မှာ သူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ပါ။ ဒါ ဥပမာ ပြောတာပါ။ လူသားတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းက သူ ယုံကြည်ရာ အယူဝါဒနဲ့ မပက်သက်ဘူးဆိုတာ အလွန်ရှင်းတဲ့ ကိစ္စပါ။
လူ့သမိုင်းတလျောက် လူ့ဘောင်ဘ၀ တိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက် ဥာဏ်ရည်ထူးချွန်ထက်မြက်သူ လူသားများက ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ လှည်းဘီး မှစပြီး အနုမြူစွမ်းအင်အထိ ဖေါ်ထုတ်တီထွင်ပြီး လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း သာယာဝပြောရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ မနေ့တနေ့ကပဲ HIV ပိုးကို နိုင်နင်းတဲ့နည်းလမ်းတောင် တွေ့ထားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းလည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မည်သည့်ဘာသာ၊ မည်သည့်လူမျိုးအတွက်
ဆိုတဲ့ ဆန္ဒစွဲဖြင့် တီထွင်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း အေးချမ်းသာယာဝပြောစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပါ … လူသားအားလုံးရဲ့ အကျိုးအတွက် ဟူသော စေတနာဖြင့်သာ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ယဉ်ကျေးမှု လွန်စွာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေပြီဖြစ်သော ယနေ့ခေတ်တွင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အမြင် ကျဉ်းမြောင်းသော လူစဉ်မမှီတဲ့အတွေးအခေါ်များကို ရှက်ရွံ့သင့်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိုသို့ လူရာမ၀င်တဲ့ အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ်များအတွက် နေရာမရှိသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များမှ သင်ခန်းစာယူပြီး ဥာဏ်ရည်မြင့်သူ မြန်မာပြည်သား မည်သည့်ဘာသာဝင်၊ မည်သည့်လူမျိုးကိုမဆို တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ပြုစုပျိုးထောင်လေ့ကျင့် ပေးသွားရန် စိတ်ဆန္ဒထားရှိသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံသာယာဝပြောပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လူတွေကသာ အဓိက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနေရာတွင် ဘာသာရေးသည် သာမညသာဖြစ်တယ်။
တိုးတက်နေသော နိုင်ငံများကို လေ့လာကြည့်လျှင် ဘာသာရေးထက် လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုသာ မှန်ကန်စွာ အသုံးချနေသောကြောင့်ဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အချို့သော နိုင်ငံရေးသမားများက ဘာသာရေးကို ဗန်းပြအသုံးချပြီး လူပြိန်းအကြိုက် စကားလုံးတွေသွင်သွင်သုံးရင်း နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ် သစ္စာဖေါက်နေမှုများကိုလည်း သတိဖြင့်ဆင်ခြင်ကြည့်က မြင်တွေ့နိုင် ပါတယ်။
ထို့အတူ အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်ဝါဒကို ကာကွယ်ရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သူတပါး ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ
သာသနာကို ပုတ်ခတ်စော်ကားတိုက်ခိုက်ရင်း မိမိကိုယ်တိုင်အစွန်းရောက် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေကြသော ခါတော်မှီ
မျိုးချစ်ကြီးများရဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော ဗုဒ္ဒဘာသာအစွန်းရောက်ဝါဒ
ရှိသော တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်လာနိုင်ကြောင်း သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
( Aug 22 – 2012 တုန်းက ကျနော့်ရဲ့ မှော်ဆရာမေးလ်ဂရုမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုကို အနည်းငယ် ပြန်ပြင်ပြီး ရေးထားတာပါ)
Posted: 08 Mar 2013 01:09 AM PST
Bapa kepada Saiful Bukhari Azlan tampil ke hadapan hari ini mengakui kes liwat kedua yang melibatkan anaknya dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebuah "konspirasi politik jahat" untuk memburukkan nama pemimpin utama Pakatan Rakyat (PR) tersebut.
"Ini adalah konspirasi politik jahat untuk membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kali kedua," kata Azlan.
"Saya memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya.Beliau dan keluarganya telah banyak menderita dan sengsara akibat fitnah ini," tambah beliau.
Apabila ditanya mengapa menunggu hingga hari ini baru tampil untuk membuat pengakuan, Azlan berkata ia adalah kerana selepas membuat penilaian sendiri dan menerusi maklumat yang disampaikan oleh orang terdekat, beliau mula dapat melihat kebenaran disebalik kes melibatkan anaknya tersebut. -TMI
Liwat II konspirasi untuk jatuhkan Anwar – Bapa Saiful Bukhari
"Saya Azlan Mohd Lazim (gambar) sesungguhnya percaya anak saya Saiful Bukhari telah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab termasuk Khairil Annas Jusoh, pegawai khas kepada Perdana Menteri.
Konspirasi untuk penjarakan AnwarMenurut Azlan, kes tersebut adalah konspirasi politik jahat untuk memenjarakan Anwar kali kedua.
"Saya mahu rakyat yang cintakan negara ini tahu niat jahat mereka. Segalanya dirancang dengan begitu rapi oleh Khairil Annas Jusoh. Ia dilakukan dengan begitu terancang sekali.
"Saya tak mahu bersekongkol. Empat tahun saya ikuti perbicaraan bersama peguam. Sebagai bapa, saya rasa ada benda yang tidak kena. Ada dalang dalam kes ini," kata Azlan.
Beliau juga bersedia ke mahkamah jika diperlukan berikutan kes rayuan Fitnah II akan dimulakan Jun ini.
"Saya ada hak untuk terangkan. Kalau diminta ke mahkamah, saya sanggup ulang semula (kenyataan ini)," kata Azlan.
Kenyataan yang dibacakan Azlan pada sidang media hari ini.
Dalam pada itu, beliau turut memohon maaf kepada Anwar dan keluarga yang menderita akibat fitnah ini.
"Walaupun pada ketika perbicaraan berjalan, saya dilihat bersama anak saya. Ini semata-mata kerana kasih seorang ayah yang memberi sokongan moral kepada anak yang tidak beribu," katanya.
"Setelah sekian lama mengumpul maklumat sama ada dalam perbicaraan mahupun dikirim orang ramai, saya dapati kebenaran terserlah," kata Azlan.
Sementara itu, Johari berkata, beliau dihubungi Azlan kurang sebulan lalu.
"Pada mula saya fikir ada kes terbaru. Tapi selepas Encik Azlan hubungi maklumkan mahu buat pendedahan, kita kena bantu.
"Sidang media ini pun dibuat secara tertutup kerana kita bimbang keselamatan Encik Azlan," kata Johari.
Tanggal9Januari 2012, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Zabidin Mohd Diah memutuskan Anwar bebas dari tuduhan Fitnah II yang mengaitkan beliau dengan bekas pembantunya, Saiful Bukhari. – NS/KD
Bukankah GB kata selalu, kebenaran akan tetap terbongkar juga. Habislah Najib, UMNO dan sekalian macainya
UMNO akan tetap binasa jua akhirnya.
Posted: 07 Mar 2013 11:10 PM PST
Remember Azman, Sofie's son? The one who wanted to stop schooling after his PMR so he could start working immediately as he was no longer interested to go to school?
So what kind of jobs did he think he could get when all he had was his PMR qualifications, which by the way, was not that good? Since his interest was in cooking, he was thinking of helping out at food stalls etc. During that time,afriend of mine, who's in the management ofaprivate culinary school, suggested to me to send him to the culinary school to take upaone year course in kitchen practice.
Personally, I would have preferred it if he had chosen to complete his SPM first. But I knew that while I could have coaxed him to continue schooling up to form five, he'd ponteng sekolah most of the time, like he did when he was in form 3. He was under sponsorship then, why would I want to waste the sponsor's money when I knew he'd play truant most of time, right? It was much easier for me to coax him to join the culinary school, where his interest lies.
Indeed, he was excited about the idea. Sofie was already very weak by the time he had to register, so I was the one who accompanied him during registration day.
Initially things went quite well. But he started befriendingagirl who came fromawell-to-do family, and soon he started acting like he was fromawell-to-do family too. He started asking for money from his mother… onaweekly basis! I told him to stop asking for money from his mother.
Then when Sofie died, Azman's attitude turned for the worse. He felt as though he was the best amongst his siblings, and just because I took interest in his well-being, he thought he could depend on me every time. He didn't want to listen to his aunt who became his new guardian, and he didn't even bother to go and see his siblings during weekends. Instead he chose to go back to another aunt… the aunt who had once uponatime spread the news about Sofie's HIV status to the whole kampong.
I finally had to putastop to his big-spending style. I told him to manage his own finances (by then his Tabung Kemahiran loan had already been banked into his bank account) and to no longer ask for my help. Inaway, I was hoping that by doing so, the boy would go back to his aunt Rozi and his siblings if he needed anything.
Well, he didn't. While he didn't dare call me to seek for any more help, he didn't go back to his siblings either. Asamatter of fact, when his older brother tried to advise him to apologise to their aunt Rozi (the new guardian), the two brothers almost ended up inafight.
The aunt and Azman's3siblings gave up on him. They didn't bother to contact him and anymore, and he didn't bother to contact them either, telling people that his family had abandoned him.
When I went to visit Rozi and the3children last year, they told me that Azman had stopped going to the culinary school. They assumed he did not complete his one year course there because Azman seemed to be at the other aunt's house in another town most of the time. I guess they didn't bother to find out further and Azman didn't want them to bother him too. I was quite disappointed, thinking that all my effort in helping him to getaplace at the culinary school, went to waste.
Well, today my friend (the one who's in the management of the culinary school) called me up, asking me if Azman had got himselfajob. Apparently Azman did complete his one year course, entitling him toalevel2certificate. Thank goodness!
His attitude hasn't changed though. Still as stubborn and egoistic as before and still not wanting to apologise to his aunt Rozi for being so rude. Neither had he bothered to contact his siblings.
I am however still relieved that he completed his one year course. Continuing to level3wasn't part of the earlier deal, although I was hoping he would. With the cert that he has now he can apply foradecent job, with enough salary for him to start paying his Tabung Kemahiran loan. He is still young, just 17. Hopefully when he is more matured he will realise how much his family means.
Posted: 07 Mar 2013 10:43 PM PST
Lou Andreas-Salomé (born Louise von Salomé or Luíza Gustavovna Salomé, 12 February 1861 –5February 1937) wasaRussian-born psychoanalyst and author. Her diverse intellectual interests led to friendships withabroad array of distinguished western luminaries, including Nietzsche, Freud, and Rilke.
Seeking an education when she was seventeen Salomé persuaded the Dutch preacher Hendrik Gillot, twenty-five years her senior, to teach her theology, philosophy, world religions, and French and German literature. Gillot became so smitten with Salomé that he planned to divorce his wife and marry her. Salomé and her mother fled to Zurich, so she could acquireauniversity education. The journey was also intended to be beneficial for Salomé's physical health; she was coughing up blood at this time.
Nietzsche and later life
A fictional account of Salomé's relationship with Nietzsche is described in Irvin Yalom's novel, When Nietzsche Wept. A biography in Swedish on Lou Salomé, which also covers her relationship with Paul Rée, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche and Sigmund Freud was edited in 2008 on Mita bokförlag by the Swedish author Mirjam Tapper. The title of the book is "Den blonda besten hos Nietzsche - Lou Salomé".
Salomé and Rée moved to Berlin and lived together untilafew years before her celibate marriage to linguistics scholar Friedrich Carl Andreas. Despite her opposition to marriage and her open relationships with other men, Salomé and Andreas remained married from 1887 until his death in 1930. The distress caused by Salomé's co-habitation with Andreas caused the morose Rée to fade from Salomé's life despite her assurances. Throughout her married life, she engaged in affairs or/and correspondence with the German journalist Georg Lebedour, the German poet Rainer Maria Rilke, on whom she wrote an analytical memoir,the psychoanalysts Sigmund Freud and Viktor Tausk, among others. Accounts of many of these are given in her volume Lebensrückblick.
Posted: 07 Mar 2013 10:22 PM PST
Saiful's dad: Anwar innocent of sodomy
Saiful Bukhari Azlan's father, Azlan Mohd Lazim, said that his son was used by several unscrupulous people, includingaspecial officer to the prime minister, to fabricate lies against the opposition leader.
KUALA LUMPUR: Inashocking turnaround of event, Saiful Bukhari Azlan's father toldagroup of selected media today that Opposition Leader Anwar Ibrahim is innocent of the Sodomy II accusation.
"My son was used by several unscrupulous individuals, including Prime Minister Najib Tun Razak's special officer, Khairil Annas Jusoh.
"These people masterminded the slander against Anwar, using my son," he alleged.
The Attorney-General's Chambers appealed against the verdict and the Court of Appeal is scheduled to hear the case on July 22.
Azlan,asemi-retiree, said that he had stood by his son's accusation against Anwar in the past to provide moral support to Saiful.
"He's my son and I know he is good person but as I was attending his trial in the last four years, I sensed something was amiss.
"Some people also gave me evidence which convinced me of Anwar's innocence. AsaMalay andaMuslim, I cannot continue beingapawn in this evil scheme of things," he said.
"My lawyers prepared my statements, under the instructions of Khairil," he alleged.
"The government did not meet me to discuss the case or even ask my opinion. Everything is carefully handed by Khairil," said Azlan.
"If he is unhappy, that is up to him. All I know is that my conscience is clear," he said.
"God willing, if I have the opportunity, I will also personally tender an apology to Anwar and his family for the troubles they have undergone," he said.
Posted: 07 Mar 2013 10:19 PM PST
အတ်စ္စလာမို့ အလိုင်ကွန်းမ် ဝရဟ်မသွလ္လာဟေ့ ဝဗရကာသုဟူ
' မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စ်လင်မ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ လိုလားမှုနှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက် '
စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည် အင်အားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာ့ဟ်ရစူလ်၏အမိန့်ကို နာခံခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုကို ရရှိပါမည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အသျှင်မြတ်နှင့် အသျှင့်ရစူလ်၏ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို မျှော်လင့်မက်ထား၍ ထိုအသျှင်မြတ်နှင့် အသျှင့်ရစူလ်၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၌သာ မုချဧကန် အောင်မြင်မှုကြီးကို လှမ်းယူဆွတ်ခူးနိုင်သည့် အင်အားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမည်။ ဤသည်ပင် စစ်မှန်သော"စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ"သည့် ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပါသည်။၁။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာရှင် အကြီးအကဲများ ခင်ဗျာ – ယင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှု၌
နဗီတမန်တော်များ၏ အမွေစားအမွေခံများဖြစ်သော သာသနာ့ပညာရှင်များသည် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု ပါဝင်ရပ်တည်ရန်
အရေးကြီးပါသည်။ သို့မှသာ အွမ္မသ်ထုတစ်ရပ်လုံးသည်လည်း အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာ့ဟ်ရစူလ်၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ
စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းတွင် ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် တိကျခိုင်မာစွာ ရပ်တည်လာပေမည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လောကဓါတ်ပညာရှင်များ ခင်ဗျာ – ယင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှု၌ သာသနာ့ပညာရှင်များ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်မှုနှင့်အတူ လောကဓါတ်ပညာရှင်များလည်း အထူးလိုအပ်ပေသည်။ မိမိတို့ တတ်သိ
နားလည်ထားသော ခေတ်ပညာရပ်များကို အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာ့ဟ်ရစူလ် ကျေနပ်နှစ်သက်စေရန် ရည်သန်၍ (မြန်မာ)
မွတ်စ်လင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံး အစ္စလာမ့်လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသွားရမည်။ သို့မှသာ
အဆိုပါ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အသက်ဝင်ပြီး အနှစ်သာရပြည့်ဝသော အကျိုးထူးများကို လူတမ်းစေ့ ခံစားနိုင်
၃။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ခင်ဗျာ – ယင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုသည်
တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်း၊ တစ်ဖွဲ့ကောင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခင်ခေတ်ကာလများ၌ သဘောထားချင်း
မတိုက်ဆိုင်ကြသည့်အတွက် အဖွဲ့အသီးသီး တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးပြုမှုအတိုင်းအတာ၌လည်း မွတ်စ်လင်မ်
တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး အကျိုးပြုနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ချေ။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများအား မွတ်စ်လင်မ်တစ်မျိုးသားလုံး၏
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အားကိုးအားထားမှုတို့သည် တဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်နှင့်အလ္လာ့ဟ်ရစူလ်၏
လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မွတ်စ်လင်မ်တစ်မျိုးသားလုံး၏ ခိုင်မာသည့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့်သာ ကြုံကြိုက်လာသမျှ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားဖြေရှင်းသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ခင်ဗျာ – စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည်
အင်အားဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိုထိုသောစည်းလုံးညီညွတ်နေသည့် (အဖွဲ့အစည်း) အင်အားများ ရှိခဲ့သော်ငြားလည်း ၎င်းအဖွဲ့အစည်း အင်အားတို့သည် အောင်မြင်မှုဆီသို့ အရောက် ပို့ဆောင်မပေးနိုင်သည်မှာ နဗီတမန်တော်များ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းများက ဒွိဟမဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သက်သေထူနေပါသည်။ သို့ပါ၍ အောင်မြင်မှုဆီသို့ အရောက်တွန်းပို့ပေးနိုင်သော စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် (၁) အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာ့ဟ်ရစူလ် လိုလားနှစ်သက်သော လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ (၂) အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာ့ဟ်ရစူလ်၏အမိန့်တော်များကို နားလည်တတ်ကျွမ်းပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးသော ပညာရှင်များ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်မှုပြုခြင်း၊ (၃) ထိုက်တန်ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာကို ယုံကြည်မြတ်နိုး၍ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသော ဥပဒေပညာရှင်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသည်သာလျှင် ယုံကြည်စိတ်ချ မှန်ကန်တိကျလှသော အောင်မြင်မှုကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ ရရှိပေမည်။ ဤသို့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသည့် လိုလားမှုနှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို အသိတရားရှင် မွတ်စ်လင်မ်တိုင်း မုချဧကန် လက်ခံမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စ်လင်မ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ အထက်ပါ လိုလားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(ကျွန်ုပ်ထံသို့ ၂၀၁၃ ခု၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် မွတ်စလင်မ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များထံမှ အီးမေလ်းမှတဆင့် ပေးပို့လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်များအတွက် အထူးတင်ပြပေးဖို့ အရေးကြီးပါကြောင်းနဲ့ ဆက်လက်၍ သက်ဆိုင်သူများအားလုံးသို့ အသိပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သောကကြီးစွာနဲ့ ပေးပို့လိုက်တဲ့ ညီနောင်တွေကို လေးစားပါတယ်)
Posted: 07 Mar 2013 10:24 PM PST
UPDATES FROM THE STAR:
IGP says operations ongoing against armed group
KUALA LUMPUR: Opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim has filed a
RM100mil defamation suit against Utusan Melayu (Malaysia) Bhd, Sistem
Televisyen Malaysia Bhd (TV3) and three others over news reports
allegedly linking him to the armed intrusion in Sabah.
BBC ONLINE:7March 2013
Posted: 07 Mar 2013 09:26 PM PST
HAPPY INTERNATIONAL WOMEN'S DAY to all my sistas, my girlfriends, my blog readers and even my haters, enjoy this song!
Ingatkan nak suruh siapa yang rasa boleh relate dengan lirik lagu ni angkat tangan tapi takut kang aku sorang je angkat, uols yang lain semua control cun. hahaha! Haveanice weekend ahead!
Posted: 07 Mar 2013 09:13 PM PST
By NICK CUMMING-BRUCE March 7, 2013
GENEVA — Political reforms that are delivering greater freedom in Myanmar could falter if the authorities do not tackle some conspicuous failings, including continuing torture in prisons and discrimination against ethnic minorities,aUnited Nations investigator said inareport released on Thursday.
"Reforms are continuing in the right direction," the investigator, Tomás Ojea Quintana, concluded in the report, written afteravisit to Myanmar in February. But major shortcomings continue particularly in discrimination against the Muslim Rohingya minority and abuses in northern Kachin State, where the military has engaged in fierce fighting with minority rebels.
"Now is the time to address these shortcomings before they become further entrenched and destabilize the reform process," Mr. Ojea Quintana said.
Despite the progress of reforms, "there remainsalarge gap between reform at the top and implementation on the ground," he added. The Myanmar authorities offered no immediate, formal response to the assessment.
The report will be discussed next week atameeting of the United Nations Human Rights Council againstabackground of debate on whether it is time to reward the sweeping changes initiated by Myanmar's president, Thein Sein, by ending its designation asa"country of concern," acquired during decades of ruthless military repression and abuse.
For that to happen, diplomats in Geneva suggest that Myanmar will first need to allow the opening ofaUnited Nations human rights office in Yangon as it agreed in principle last year. United Nations human rights workers have paid three visits to Myanmar in recent months to negotiate terms but have been unable to reach an agreement.
Mr. Ojea Quintana's report will also help to shape perceptions of Myanmar atapoint when Mr. Thein Sein is touring Europe in search of aid and investment, seeking to dispel any lingering doubts about his government's intentions after decades of isolation asapariah state.
Speaking in Brussels on Tuesday, Mr. Thein Sein said his government had reduced the "culture of fear" in Myanmar, adding, "You have my promise we will continue on this path."
Taking stock of the changes led by Mr. Thein Sein since he became president in March 2011, Mr. Ojea Quintana noted that Myanmar had released around 850 political detainees underaseries of amnesties but said there were credible reports that some 250 prisoners of conscience remained incarcerated.
He expressed particular concern over the treatment of Rohingyas,aMuslim ethnic group, in Myanmar's Rakhine State. Clashes there between Muslims, including Rohingya, and Buddhists in October and November left nearly 200 people dead. Around 120,000 people are still displaced.
Mr. Ojea Quintana said he understood that the vast majority of the 1,100 people detained in the violence were Rohingya and that he had heard accusations that Muslims had been tortured and beaten to death in prison after the violence broke out last year.
He expressed concern at the inability of relief agencies to deliver humanitarian aid and health care, describing the camp for displaced people that he visited as resemblingaprison and urging relocation of the displaced to avoidahumanitarian disaster in the approaching rainy season.
He also urged Myanmar's neighbors to be more proactive in addressing the plight of Rohingya trying to escape the harsh conditions and insecurity in Rakhine, estimating that their numbers would reach 20,000 by April. Many flee in rickety boats, and Mr. Ojea Quintana said that hundreds had drowned. Humanitarian agencies say Bangladesh, India and Thailand have pushed back boats carrying Rohingya refugees in recent months. Mr. Ojea Quinta called for action to tackle corruption and trafficking linked to the movement of the Rohingya, saying that he had "received reports of the involvement of security officials in both Myanmar and receiving countries at every stage of the journey."
UN Special Rapporteur Tomas Ojea Quintana talks to the media as he leavesapress briefing on the situation of the restive Rakhine state held in Yangon on July 30, 2012. Quintana flew into the main city of Yangon on July 29 foravisit set to includeatrip to the restive western state as well as meetings with Myanmar's President Thein Sein and civil society. – AFP PHOTO
Earlier this month Amnesty International warned of "credible reports" of abuses — including rape and unlawful killings — by both Rakhine Buddhists and the security forces.
Earlier this month, President Thein Sein told the United Nations that refugee camps or deportation was the "solution" for the Rohingya, according to his official website.
Posted: 07 Mar 2013 05:13 PM PST
Memang saya sokong BN..ramai jugak sokong PR..negara kita demokrasi..Alhamdulillah..
Anak2 saya menengok video ini..Hn berkata.."betul jugak cakap baba..pandai baba bercakap.."
Saya menengok jugak..Hn and Ftn berdiri belakang saya dan menonton sampai habis tape.
Semua orang senyap mendengar..
Air muka anak2 saya..mereka tetap sayang dan menghormati bapa mereka..
Berjuang dalam politik yang berlainan landasan, semoga Allah SWT kurniakan kejayaan yang cemerlang kepada baba mereka dalam PRU 13..Ameen.
Tolong jangan cakap janda tua meroyan...muak dah dengan ejekan tu..Allah SWT yang menentukan takdir kita..
..kan sudah dicatat dalam Al-Lauh Mahfuz..
Posted: 07 Mar 2013 08:09 PM PST
M-Media Blog, ဘာသာပြန်, နှလုံးသားအာဟာရ
မတ်လ- ၇ ၊ ၂၀၁၃ M-Mediaလူမင်းဟန်
လောကမှာ သူတပါးအလုပ်ကို လုပ်နေရသူဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရူံးရတာ သဘာဝပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေ အလုပ်ရှင်ကိုပေးလိုက်ရတာပါပဲ။သူများစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်နေတာလို့ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကျတော်တို့ဘာလို့ အဲဒီအခြေအနေကို ရောက်ရတာလဲ။ သူများဆီမှာ လခစားလေး လုပ်နေရင် ဟုတ်တုတ်တုတ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်မိကာမှ ရှုံးနေမှာလား၊ ထိုင်နေရင် အကောင်းသား ထသွားမှ ကျိုးနေရင် ဒုက္ခ၊ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစလုပ်ရမှာလဲ၊ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား….စသည်စသည်ဖြင့် အကြောင်းပေါင်းများစွာရှိမှာပါ။ နောက်ဆုံး အရင်းစစ်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မိရင် နစ်နာသွားမလား ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ကြောင့် ပဲလို့ပြောရမည်ထင်သည်။
ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့ မျက်တောင် တစ်ဆုံးတင်ကြည့်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်ရမှာပါ။ နောင်အနာဂတ်မှာ သူများကို ချည်း မှီခိုနေလို့ဖြစ်မလား။ ကျတော်တို့ဘ၀မှာရော တသက်လုံးသူများ အလုပ်ကိုချည်း လုပ်သွားရရင် တန်ပါ့မလား။ ဒီတော့ ကျတော်တို့ဘ၀မှာ ကိုယ့်အတွက်ကို အလုပ်လုပ်တာမျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ကို ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ရှာဖွေရမယ်။ ဒီနေရာမှာကျတော် ပြောချင်တာက တကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့ ကိုယ့်ဖို့တစ်ခုတည်းကြည့်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့် တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြောတာပါ။ နောက်တစ်ခုက ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ဟာ ငါ့အတွက်ပဲ ဆိုတာ သဘောပေါက် လာရင် လူဟာ ပိုပြီး motivateဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း တီထွင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်၊ ကြံရည်ဖန်ရည် ကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျတော်တို့ဘ၀ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီလောက ထဲကို စ၀င်လာကတည်းက ကျတော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ခန္ဒာ၊ ကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် ၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ လာကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ကျတော် တို့ရဲ့ မွေးရာပါ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို သူများကိုပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ကျတော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို သူများအတွက် အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ ကုန်ဆုံးပစ်ကြပါတယ်။ သူများတွေရဲ့ပြဿနာတွေ အရှုပ်အထွေးတွေကြားထဲမှာ ကျတော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေ စွမ်းရည်တွေ ကုန်ဆုံးကုန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ် အတွေးအခေါ်နဲ့ မရှင်သန်နိုင်တော့ပဲ သူများရဲ့အကြံဥာဏ်တွေနဲ့ချည်းပဲ အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။
ဒီတော့ အချိန်မနှောင်းခင် ကျတော်တို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကိုပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျတော်ဆိုလိုတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ဝတ္တုတွေတော့ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အရာခပ်သိမ်း သူများကိုပဲ အားကိုးနေရမယ် ဆိုရင်လည်း ဒါမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု့ဆိုတာ အချိန်မရွေး ပျောက်ပျက်သွားနိုင်တာမျိုးလေ။ ကျတော်ဆိုလိုတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်။ အချိန်ကို ကိုယ့်တိုးတက်မှု့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ပညာရည်မြင့်မားဖို့ အတွက် အသုံး ချနိုင်ရမယ်။ ဒီလိုမျိုး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု့ကသာလျှင် ကျတော်တို့ဘ၀ကို တိုးတက်မြင့်မားစေမှာပါ။
တကယ်လို့အခြေအနေအရ သူများကို အားကိုးရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအခြေအနေကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြိုးစားပါ၊ ပြင်ဆင်ပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင် တခြားသူတွေက ကိုယ့်ကို ပိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်တို့ဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲ နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာလူလာဖြစ်ကြတာပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ အတိတ်ကလက်ခံ ခဲ့တဲ့ သဘောတရားတွေကို အခုလက်ခံချင်မှ လက်ခံတော့မယ်။
ကျတော်တို့သတိမထားမိတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်။ လောကမှာရှိတဲ့ လူသားတွေကို အလွှမ်းမိုးဆုံးအရာဟာ Self-interest လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်အကျိုး ကိုယ်ကြည့်မှု့ပါပဲ။ လူတိုင်းဟာ အရင်ဆုံး ကိုယ့်အတွက်ကို စဉ်းစားကြတာပါပဲ။ ဘယ်အလုပ်ရှင်မှ ကိုယ့်ကို ချစ်လွန်းလို့ ခေါ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တန်အောင်ခိုင်းလို့ရလို့ ခေါ်ထားတာပါ။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ တစ်နေ့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ့်ထက်ပို လုပ်နိုင်တဲ့သူကို တွေ့တဲ့တစ်နေ့ ကိုယ့်ကို ဘေးထုတ်ပစ်မှာပါပဲ။ ဒါကျတော် အလုပ်ရှင်တွေကို အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါသဘာဝပဲ။ ဒီတော့ကျတော်တို့ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အကူအညီတွေ အထောက်အပံ့တွေကိုချည်း မျှော်လင့်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကို အထီးကျန်ဆန်မှု့လို့ မမြင်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှု့လို့မြင်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်မှု့ရှိတဲ့သူဟာ ပိုပြီးလွတ်လပ်မှု့ ရှိပါတယ်။ ဟိုလူ့အကူအညီ ဒီလူ့အထောက်အပံ့ တွေကိုသိပ်မျှော်လင့်နေ စရာမလိုပါဘူး။ ငါ့ရဲ့အခက်အခဲကို ငါကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု့မျိုးထားဖို့လိုပါတယ်။
သူများကို အားကိုးချင်တဲ့ စိတ်ဆိုတာ အင်မတန်လွယ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိုင်ပင်စရာလူတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေဖို့ အတွက် ဆေးဝါးတွေလည်း ရှိတယ်။ ထမင်းမငတ် ဖို့ပဲရတဲ့ အလုပ်တွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကျတော်တို့ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ခံလိုက်ရင်၊ ဒါတွေထဲမှာ ကျတော်တို့ ဘ၀ကိုမျှောလိုက်ရင် ကျတော်တို့ဟာ ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ သူတွေလိုဖြစ်သွားပ်ါလိမ့်မယ်။ ကျတော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုက လွဲရင် ပြင်ပက အကူအညီတွေကိုချည်း အားကိုးနေတဲ့ သူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းဘ၀မှာ ကိုယ်တိုင်နင်လားငါလား ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်အချိန်၊ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အချိန်ရောက်လာရင် ကျတော်တို့ကိုယ်ကျတော်တို့ အားကိုးစရာ ဘာမှ မကျန်တော့ပဲ ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ကျတော်တို့ ဘ၀မှာ ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု့ အတွက် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ နောက်တဆင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ပိုင်ဖို့၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာဟာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေဖို့အတွက် ကြိုးစားရပါမယ်။
ပထမအဆင့် - အချိန်သတ်မှတ်ပါ
ကော်နီးလီးယက်စ်ဗန်ဒါဗစ် (Cornelius Vanderbilt) ဟာ အသက် ၁၂ မှာ သူ့အဖေရဲ့ သဘောင်္လုပ်ငန်းသေးသေးလေးမှာ ၀င်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ အဲဒီအလုပ်ကို မကြိုက်ပါဘူး။ကော်နီးလီးယက်စ် ဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် သဘောင်္လုပ်ငန်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒီလို အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ထားလိုက်တာဟာ သူ့ဘ၀ကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ သူ့ရဲ့ သင်ယူလိုမှု့ကို နှိုးဆွပေးပါတယ်၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ သူ့ရဲ့မျက်စိရော နားရောကို ဖွင့်ထားဖို့ အဆက်မပြတ် သတိပေးသလိုပါပဲ။ သူ့အဖေရဲ့အလုပ်ကနေ ရသမျှကိုသင်ယူတယ်၊ ပိုပြီးကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရ မယ်ဆိုတာလေ့လာတယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှာ သူ့အမေဆီကနေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ချေးပြီး မင်ဟက်တန် နဲ့ စတေတန်ကျွန်းကို ပြေးတဲ့ ခရီးသယ်တင် သဘောင်္လိုင်းကို ထောင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ သူ့အမေဆီက ချေးထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကို ပြန်ဆပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကော်နီးလီးယက်စ် ဟာ အဲဒီခေတ်က အမေရိကန်မှာ အချမ်းသာဆုံး လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်ကတော့ " ဘယ်တော့မှ သူများ အစေခံမဖြစ်စေနဲ့၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ် အောင်လုပ်" ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ဆိုတာ ကျတော်တို့ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံး အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်ဟာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံယူဖို့ အတွက်၊ ပညာရအောင် လုပ်တဲ့ အချိန်ကလွဲရင် ကျတော်တို့အတွက် အချိန်သေ တွေပါပဲ။
ဘ၀မှာ သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်ဆိုတာ ရှိတာပါပဲ။ကော်နီးလီးယက်စ်ဗန်ဒါဗစ် လိုပဲ ကျတော်တို့ဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘ၀အတွက် အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီး ကျတော်တို့ပတ်ဝန်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဘာတွေပြောင်းလဲနေတယ်၊ ဘာတွေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ် ဆိုတာတွေကို မျက်ချေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေဖို့လဲ လိုပါတယ်။ လောကမှာရိုးသားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်တာနဲ့ နုံတာ အ,တာ မရောထွေးမိပါစေနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် အတွေ့အကြုံယူဖို့ လုပ်လည်း လုပ်ရပါမယ်။ တနေ့မှာ ငါဟာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိကို ရှိသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရသလောက် အတွေ့အကြုံတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း မှတ်သား စုဆောင်းသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့် – တာဝန်ယူလိုစိတ်မွေးပါ
ကျတော်တို့ဘ၀ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အခါတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေဟာ ကျတော်တို့ အတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ၊ အလေ့အကျင့်တွေ သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါ။ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ့်အလုပ်လို့ သဘောထားပါ။ တာဝန်ယူလိုစိတ်မွေးပါ။ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ အပိုင်းကို ဒီထက်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားပါ။ သူများမလုပ်လိုတဲ့ ပရော့ဂျက်တွေ၊ မပြီးသေးတဲ့ အလုပ်တွေကို ကိုယ်က ပြီးအောင် လုပ်ပါ။ပြဿနာတွေကို အထက်လူကြီးဆီ ယူသွားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ပြဿနာဖြေရှင်း နည်းတွေကိုသာ အထက်လူကြီးတွေကို တင်ပြပါ။ တကယ်လို့ အထက်လူကြီးဟာ အဲသလောက်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူး ဆိုရင် အဲလိုအလုပ်မျိုး၊ အဲလိုနေရာမျိုးမှာ မနေပါနဲ့။ သတ္တိရှိပါ။ ကျတော်တို့ဟာ သူများအလုပ်ကိုပဲ တစ်သက်လုံးလုပ်သွားမယ့် သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျွန်ဇာတ် မသွင်းပါနဲ့။ ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် သခင် ပဲဖြစ်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့သတ္တိတွေကို အတုံး မခံပါနဲ့။
အလုပ်တစ်ခုဟာ လခ ရတာနည်းချင် နည်းပါစေ။ တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းများတယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ပိုရလာဖို့ရှိတယ်၊ သင်ယူစရာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုရင် အဲသလို အလုပ်မျိုးကို ရွေးသင့်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတော့ပိုရပါရဲ့ ဘာမှလည်း လုပ်စရာမရှိဘူး၊ သင်ယူစရာလည်းမရှိဘူး၊ တာဝန်လည်းသိတ်မယူရဘူုးဆိုရင် အဲလို အလုပ်မျိုးကို မရွေးသင့်ပါဘူး။ ကျတော်တို့ဦးတည်ရမှာ ပိုက်ဆံ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျတော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည် အချင်းတွေတိုးတက် အောင်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို အားကိုး တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေရလာဖို့ဟာ ပိုက်ဆံ ရဖို့ထက် အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာကျတော်တို့ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးသုံးသွားရမှာပါ။
တတိယအဆင့် – အစာကွင်းဆက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးကို ရောက်အောင်လုပ်ပါ။
၁၄၉၉ မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဆဌမမြောက်အလက်ဇန်းဒါး (Pope Alexander VI) ဟာ သူ့သား ချက်ဇရီဘောဂျီးယား (Cesare Borgia) အတွက် အီတလီမှာ နိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခု တည်ထောင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလွယ်တဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အီတလီဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ တစ်စုတစည်းတည်း ရှိတာမဟုတ်ပဲ မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဘောဂျီးယား ရဲ့ ရိုမဂ်နာ(Romagna) မြို့ပြ နိုင်ငံလေး ဟာ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ အပြင်းအထန် ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အီတလီနိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံကို လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်၊ ဥရောပရဲ့ တခြား အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိတယ်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က တခြားမြို့ပြနိုင်ငံတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကလည်း လျှော့တွက်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ သူ့သားရဲ့ နိုင်ငံလေး ဘေးကင်းစေဖို့ အီတလီရဲ့ သြဇာအကြီးဆုံး နိုင်ငံရေးမိသားစုတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံရပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ ၁၂ နဲ့လည်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ဖို့ ကြေးစားစစ်တပ် ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းရပါသေးတယ်။
ဘောဂျီးယားဟာ အလွန်အကွက်မြင်ပြီး ထက်မြတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က သူ့နိုင်ငံသေးသေးလေးကို ကျော်လွန်ပြီး အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အခြေအနေဟာ တခြားသူတွေကို မှီခိုနေရပါတယ်။ ဒီအမှီအခိုတွေဟာ အချိန်မရွေး သူ့အတွက် အန္တရယ်တွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ဆီးပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မှီခိုအားထားနေစရာ မလိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်မှသာ သူလိုချင်တဲ့နေရာကို ရောက်မှာပါ။
ပထမဆုံးငွေကြေးအမြောက် အများသုံးပြီး အီတလီနိုင်ငံရေး မိသားစုတွေကြားမှာ သူ့သြဇာကြီးမားလာအောင် လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအထဲက သူ့ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်တဲ့ သူတွေကို အပြတ်ရှင်းပစ်ပါတယ်။ ကြေးစားစစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင် စစ်တပ်တည်ဆောက်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘုရင်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု့ကို တွန်းလှန်ဖို့ တခြား ဥရောပရဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ အီတလီမြို့ပြတွေကို တခုပြီးတစ်ခု သိမ်ယူပါ တယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့ အမြဲကြံစည်နေကြတယ် ဆိုတာ သူကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ ဒီလိုလောကကြီးမှာ ကိုယ်က သူများကို အလွန်အမင်းအားကိုးမယ်၊ သူများအကူအညီကို အရမ်း မျှော်လင့်ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် ဒုက္ခကိုယ်ရှာတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်။
(*** အီတလီ နိုင်ငံရေးပညာရှင် နီကိုလို မက်ကီယာဗဲလီ (Nicolo Machiavelli ) ဟာ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Prince မှာ ချက်ဇရီဘောဂျီးယားကို ထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အများကြီး ချီးမွမ်းထားပါတယ်။***)
သတ္တလောကမှာ အစာကွင်းဆက်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ(ဥပမာ- လူ၊ နို့တိုက်သတ္တ၀ါ )ဟာ အသိဥာဏ်အရှိဆုံးနဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး သတ္တ၀ါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ဟာလည်း ဘ၀မှာ အစာကွင်းဆက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးကို တတ်နိုင်သလောက်ရောက်ဖို့ကြိုးစား သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သူများကို သိပ်အားကိုးစရာမလိုပဲ တခြားသူတွေကို ကိုယ်က လွမ်းမိုးနိုင်မှာပါ။
စတုတ္ထအဆင့် – ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးတွေဟာ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ ထင်ဟပ်နေပါစေ။
ကျတော်တို့ဟာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရပ်တည်ဖို့၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီလိုကြိုးစားတဲ့ နေရာမှာ ကျတော်တို့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ မရပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ လူမှု့ရေးလုပ်သည်ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်း တည်ထောင်ရပါတယ်။ ကိုယ် တည်ထောင်လိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ထင်ဟပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ သူများလုပ်သလို လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာ အစပိုင်းမှာတော့ ကောင်းပါတယ်၊ မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အပေါ်မှာ သူများကို နည်းယူလုပ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ သူများလုပ်သလိုချည်း လိုက်လုပ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
လူ့သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူကျတဲ့သူဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှမရှိပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်းတွေ အတွေးအခေါ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို အသုံးချပါ။
သမိုင်းမှာ သြဇာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းတွေ ကိုယ်ပိုင်စတိုင် တွေနဲ့သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ အမြဲတမ်း သူများကို လိုက်တုနေ တဲ့သူဟာ အစစ် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အတု သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
( Robert Greene ရဲ့ Self – Reliance ကိုမှီငြမ်းပြီး ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။